Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nederland » Nederlaan waxay gashay xidhid cusub
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Nederland • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Dowladda Netherlands ayaa ku dhawaaqay in laga bilaabo Isniinta, Noofambar 29, dhammaan baararka iyo makhaayadaha la xidhi doono saacadaha habeenkii, bakhaarada aan muhiimka ahaynna la xidhi doono 5pm ilaa 5am. Maaskaro ayaa looga baahan doonaa dugsiyada sare, waxaana cid walba oo guriga ka shaqayn karta loogu baaqay inay sidaas sameeyaan.
Dowladda Nederlaand ayaa mar kale kordhisay xannibaadaha masiibada ah, iyadoo waddanku uu la dagaallamayo rikoorka jabinta COVID-19 qalliinka iyada oo isbitaallada qaranka ay wajahayaan xaalad 'code madow' ah.
Isagoo qiraya in tirada kiisaska cusub ee fayraska dilaaga ah ay ahaayeen "sare, sare, sare" maalin kasta, Raiisel wasaaraha Holland Mark Rutte wuxuu yiri "isbeddel yar oo hore," oo ay ku jiraan dib-u-soo-celinta waji-xidhka wajiga, kuma filna in la joojiyo rikoorka. -jabinta COVID-19 mowjadaha.
Inkastoo 85% dadka qaangaarka ah ee dalka la tallaalay, haddana sare u kaca Netherlands ayaa la sheegay in uu yahay kan ugu xun Galbeedka Yurub.
Toddobaadkii la soo dhaafay, in ka badan 20,000 caabuq maalintii ayaa la diiwaan geliyay, taasoo ku qasabtay tilmaamaha rasmiga ah ee isbitaallada inay dib u dhigaan dhammaan hawlgallada aan degdegga ahayn, oo ay ku jiraan qabanqaabada bukaannada kansarka iyo cudurrada wadnaha. Iyada oo sariiro badan looga baahan yahay bukaannada COVID-19 ee ku jira waaxyada daryeelka degdegga ah, qaar ka mid ah dadka jirran ayaa loo wareejiyay daaweyn gudaha Jarmalka.
Xoraynta waadhka iyo sariiraha ICU ee bukaanada uu si xun ugu dhacay cudurka 'coronavirus', nidaamka daryeelka caafimaadka ee waddanku wuxuu diyaarinayaa xaalad 'code madow' ah, kaas oo dhakhaatiirtu ay ku qasbanaan karaan inay doortaan qofka nool iyo kan dhimanaya, sababtoo ah la'aanta agab jireed oo lagu daweeyo qof kasta oo u baahan daryeel. "Isbitaallada ayaa durba wajahaya doorashooyin adag," guddoomiyaha guddiga caafimaadka ee Rotterdam, Peter Langenbach ayaa yiri.
In kasta oo xaaladda COVID-19 ay ku hanjabtay inay ka adkaan doonto nidaamka daryeelka caafimaadka Nederlaan bishaan, nooc cusub oo la helay, oo ah super-mutant Omicron, wuxuu kaliya ku darayaa xaalad horeba aan fiicneyn.
Markii ugu horreysay ee laga helay Botswana iyo Koonfur Afrika, nooca B.1.1.529 ee coronavirus ayaa hadda si rasmi ah loogu dhawaaqay nooc cusub oo walaac ah Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO).
Baqdinta sii kordheysa ee kala duwanaanshaha Omicron waxay isla markiiba kicisay mamnuucista safarka caalamiga ah, oo ay ku jiraan kuwa Netherlands, halkaasoo Jimcihii laga mamnuucay duulimaadyadii ka imaanayay Koonfur Afrika iyo dhowr ka mid ah dalalka deriska la ah. Waxay la socotaa wararka natiijooyinka tijaabada ah ee 'Covid-19' ee rakaabkii dhowaan ka yimid Koonfur Afrika ilaa Gegida Diyaaradaha ee Schiphol ee Amsterdam. Ugu yaraan 61 ka mid ah 600 oo qof oo yimid ayaa laga helay fayraska.